RASMI: Xavi Hernandez oo loo magacaabay macallinka cusub ee Kooxda Al Sadd – Gool FM
(Qatar) 28 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Al Sadd ee ka dhisan Waddanka Qatar ayaa ku dhawaaqday inay macallinkeeda cusub u magacaabatay halyeygii hore ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez.
Xavi oo sanadihii ugu dambeeyey ciyaaristiisa kubadda cagta ku dhex waday barashada tababarennimo ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay inuu ka fariistay guud ahaan ciyaarista kubadda cagta.
War rasmi ah oo ka soo baxay kooxda Al Sadd ayaa waxa ay ku shaacisay in Xavi uu xilka tababarennimo ee kooxda la wareegi doono bilowga xilli ciyaareedka soo socda.
Waxaa lagu tilmaamaa Xavi Hernandez mid ka mid ah xiddigihii khadka dhexe ee ugu fiicnaa Adduunka, waxaana haatan wixii ka bilowda uu bilaabay bog cusub oo ah hoggaaminta koox ama laylinta Naadi kubadda cagta ah.
Xavi waxa uu kooxda Al Sadd u saxiixay heshiis labo sanadood ah oo uu kooxda ku sii hoggaamin doono, isagoo horay u sheegay inuusan doonayn inuu qabto hoggaanka koox weyn, maadaama uu rabo inuu ka fogaado cadaadiska.
Qoraal kooban oo ay kooxda Al Sadd soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa u dhignaa: “RASMI: Xavi Hernandez waxa uu la wareegi doonaa xilka tababarennimo ee kooxda Al Sadd bilawga xilli ciyaareedka soo socda”.
39-sano jirkaan ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa u ciyaarayay kooxda Al Sadd tan iyo 2015-kii, waxaana uu u saftay 86 kulan kaddib markii uu uga soo dhaqaatay garoonka Camp Nou, laakiin waxa uu ku dhawaaqay bishaan inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta.